I-China Potasium Monopersulfate Complex Disinfectant Powder Production kunye noMzimveliso | Iqela leqela leTypt
I-potassium Monopersulfate Complex ye-Disinfectant Powder
Potassium hydrogen Persulfate, sodium chloride
Le mveliso ngumbane obomvu wecanular granular.
Le mveliso iyaqhubeka nokuvelisa i-hypochlorous acid, ioksijini entsha yezinto eziphilayo, i-oxidation kunye ne-chlorination pathogens emanzini ngokuphendula kwe-chain, iphazamisa i -NANA kunye ne-rna synthesis ye-pathogens, kwaye ibangele ukuba iprotheni ye-pathogener iqinise kwaye iphambuke, ngaloo ndlela iphazamisa umsebenzi we-pathogen enzyme system. kwaye kuchaphazela imetabolism yayo. yonyusa ukuqina kwembonakalo yeseli, kubangela ilahleko yee-enzymes kunye nezakha-mzimba, inyibilikise kwaye ichaphazele ii-pathogen, kwaye ibulala ii-pathogens.
isetyenziselwa ukubulala iintsholongwane kwizindlu zemfuyo, umoya kunye namanzi okusela. Uthintelo kunye nonyango lwezifo zebhakteriya ezinjenge hemorrhage, sputum ebolile kunye ne-Enteritis kwiintlanzi zasemanzini kunye ne shrimp.
Isekwe kule Mveliso. Soak OrSpray: (1) Ukuchazwa kwentsholongwane yendalo yezilwanyana, ukubulala iintsholongwane isixhobo samanzi okusela, ukubulala iintsholongwane, ukubulala iintsholongwane, ukubulala iintsholongwane, ukubulala iintsholongwane, ukubulala iintsholongwane, (2) Ukusela ukubulala intsholongwane, i-1: 1000 yokuxutywa; (3) Ukubulala iintsholongwane isifo esithile, escherichia coli, staphylococcus aureus, swine vesicular isifo virus, kusuleleka isifo isifo sebhsalal, 1: 400, streptococci, kuncitshisiwe 1: 800, umkhuhlane weentaka intsholongwane yahlanjululwa 1: 1600, kunye nonyawo- kwaye isifo-somlomo isifo sachaphazeleka 1: 1000.
isibulala-ntsholongwane iintlanzi kunye nebrush kwimo yaselwandle, sela amanzi kangangezihlandlo ezingama-200 kunye nesitshizi echibini lonke, 0,6 ~ 1,2g ngomzimba wamanzi oyi-1m3.
Ukuphendula okungahambi kakuhle
Akukho ziphumo ezichasayo eziye zaqwalaselwa ngokuhambelana nosetyenziso olumiselweyo kunye nomthamo.
(1) Lungiselela utsha nje ngaphambi kokuba usetyenziswe. （2） Ayidityaniswa okanye idityaniswe nezinto ze-alkali.（3） Ukupakisha akufuneki kulahlwe.
Ukuchazwa kwe-chlorine esebenzayo ayikho ngaphantsi kwe-10%
Ipakeji 1kg / ibhegi.
Iimeko zokugcina zigcinwa kwindawo epholileyo neyomileyo.
Inombolo yokuvunywa kweentwala akukho: 031853276
Edlulileyo: I-Litomycin HCL Intramammary infusion (I-Lactating Cow) yeLincomycin
Okulandelayo: Isisombululo sePodidone Iodine
Isisombululo sePodidone Iodine